KIDNAPPING AMBOHIMANGAKELY 10 no voarohirohy hiakatra fampanoavana anio
Olona folo no voarohirohy tamin’ny kidnapping zazavavy kely 1 taona sy tapany teo Ambohimangakely ny faran’ny herinandro teo. Mbola mitohy hatrany ny famotorana raha ny fampitam-baovao avy amin’ny zandarimariam-pirenena.
Raha tsy misy ny fiovana dia anio no hiakatra fampanoavana. Ny iray tamin’ireo olon-dratsy ireo no tsikaritry ny fianakaviana nijery taratra teny an-toerana. Ankoatra ny fahitana maso azy kaodikaody sy nivezivezy teny an-toerana, ren’ny fianakavian’ny lasibatra ny feony tamin’ny finday niantso olon-kafa fa “mety tsy poinsa kanefa miankina amin’ny ray aman-dreniny ihany”.
Ankoatra io ihany koa dia nandeha ny feo ary tonga tany am-pototsofin’ny lasibatra fa mikononkonona fakana an-keriny ny olona vitsivitsy fa tsy fantatra raha ho tanteraka. Noraofina natao fanadihadiana ihany koa ireo. Ankoatra izay, tao ireo mpanera izay nahitana olona roa, tao koa ireo mpanara-maso sy mpanome vaovao, indrindra ny mpanatanteraka ka ny fitambaran’izy ireo no nanome io isa folo io.
Raha ny vaovao ofisialin’ny zandary Ambohimangakely, taorian’ny fizaham-pahasalaman’ny mpitsabo teny an-toerana dia tsy misy ahiana ny aina sy ny fahasalaman’ilay zaza na dia mavesatra ao amin’ny sainy aza ny tranga izay mbola mampitomany azy tamin’ny nanasitrihana azy tany Ambohimalaza. Tsiahivina moa fa tsy mbola nisy vola lasan’ireo mpaka an-keriny tamin’ilay 14 tapitrisa ariary notakiany saika horaisiny teny amin’ny “cash point” by-pass, afak’omaly tamin’ny 10 ora sy sasany.